Zvakanakira maseva ekunze kana Webhu Kubata | ECommerce nhau
Zvakanakira maseva ekunze kana Webhu Kubata
Kana vezvemabhizimusi vatanga kuenzanisira bhizinesi ravo online, ivo vanowanzo mhanya mudambudziko rakafanana. Ndingaite sei kuti ndichengetedze webhusaiti yangu iite 24/365, chokwadi hakuzovi nekugadzirwa kana kukanganisa kodhi? Nehurombo, kwete ese ekutanga ane timu yakasarudzika mu technology yekutaurirana.
Neraki varipo mapeji ewebhu anozivikanwa seWebhu Anobata iyo inopa sevhisi yekuchengetedza peji redu richishanda pane yekunze server inochengetedza dura ratinosarudza.
Maseru ekunze kana Webhu Kubata
Iri basa rinozivikanwa se nemitambo ndeimwe yesarudzo dziri nyore kwazvo dze e-commerce kutanga nekuti mari yemubhadharo yemwedzi nemwedzi inodhura zvakanyanya pane kuchengetedza sevha yemagetsi inomhanya nguva dzese nekwanisi uye nekumhanya kunodiwa nhasi
Kune izvi tinowedzera izvo zvakawanda Kubata nzvimbo dzakasarudzika mu e-commerce inosanganisira mamwe masevhisi akadai sehunyanzvi dhizaini webhusaiti yedu zvinoenderana nezvatinoda kana kunyangwe vamwe vanotipa sarudzo yekuwedzera zvakasiyana nzira dzokubhadhara izvo zvatinoda kuti vatengi vedu vatenge.
Zvimwe zve zvakanakira kushandisa Web Hoster nyanzvi mukutengesa zvemagetsi ndeyekuti inotibvumidza kutarisa pfupiso yeese mirairo yatinayo uye nemamiriro ehurongwa. Ichi chishandiso chinonyanya kubatsira kuve ne otomatiki kudzora kweedu hesheni uye zvinonyanya kutibatsira isu kuti tigone inobudirira kudzora kwekubhadhara uye kutumira kuti zvikupe iwe basa riri nani kune vatengi vedu uye takagadzirisa mari yedu.
MaWebhu Anogamuchira Muzhinji, ivo zvakare vanopa yekutaurirana sisitimu pakati pemutengi nekambani kuti tikwanise kugadzirisa chero mibvunzo yavanogona kuva nayo nezve yedu chigadzirwa kana sevhisi, mukuwedzera pakutibvumidza isu kubatanidza peji redu nemasocial network atinoshandisa.
Hapana mubvunzo ivo Vagadziri Ivo sarudzo huru yekuita kuti hupenyu huve nyore kwatiri nekuve vezvemabhizimusi epamhepo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » nemitambo » Zvakanakira maseva ekunze kana Webhu Kubata
Maitiro matsva, Mobile Commerce
3 nzira dzekubhadhara dzaunofanirwa kuve nadzo muchitoro chako chepamhepo